အမှောင် ကမ္ဘာမှသည် ကမ္ဘာ့ဖလား ဆီသို့ . . . - Yangon Media Group
အမှောင် ကမ္ဘာမှသည် ကမ္ဘာ့ဖလား ဆီသို့ . . .
ပြင်သစ်နိုင်ငံ ပဲရစ်မြို့ဟာ ကမ္ဘာမှာ ထင်ရှားကျော်ကြားတဲ့မြို့ဖြစ်ပေမယ့် ရာ၊ ထောင်ချီတဲ့ ပဲရစ်မြို့ဆင်ခြေဖုံးရပ်ကွက် တွေကတော့ ရာဇဝတ်မှုတွေပြည့်နှက်နေတဲ့ အမဲည်းရောင်နယ်မြေဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုနယ်မြေကနေ မွေးဖွားကြီးပြင်းလာ သူတွေအတွက်ကတော့ ဘောလုံးကသာ လျှင်ကယ်တင်ရှင်ပါ။ပေါ့ဘာရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူဟာ အဲဒီဆင် ခြေဖုံးရပ်ကွက်လေးမှာပဲ သူများပစ်သတ် ခြင်းခံခဲ့ရလို့ အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပေါ့ဘာတို့ ညီအစ်ကိုသုံးဦးစလုံး ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကစားသမားတွေဖြစ်ခဲ့လို့သာ အဲဒီဆိုးသွမ်းမှုတွေပြည့်နှက်နေ တဲ့နွံထဲက ရုန်းထွက်နိုင်ခဲ့ကြတာပါ။ ” ကျောင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘောလုံးပဲကစားခဲ့တယ်။ အဲဒီနည်းလမ်းက ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကို အမှောင် ကမ္ဘာက လွတ်မြောက်စေတဲ့အကောင်း ဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုပါပဲ”လို့ ပေါ့ဘာက သူဖြတ်သန်းကြီးပြင်းခဲ့ရတဲ့ ဘဝနဲ့ပတ် သက်ပြီးပြန်ပြောခဲ့တာပါ။
ကင်မရွန်းနွယ်ဖွားလေး အမ်ဘာပီရဲ့ အဖေက ဘောလုံးနည်းပြဆရာတစ်ဦးပါ။ အမေကတော့ Handball ကစားပါတယ်။ အမ်ဘာပီဟာ ငယ်ငယ်ကတည်း က ပဲရစ်မြို့အစွန်က ဘွန်ဒီဆင်ခြေဖုံးရပ်ကွက်က ကလပ်မှာကစားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ရာဇဝတ်မှုတွေပြည့်နှက်နေတဲ့ ဘွန်ဒီရပ်ကွက်ထဲမှာ အမ်ဘာပီတစ် ယောက် ဘောလုံးကိုသာဖက်တွယ်ခဲ့တာ ဖြစ်လို့ အခုဆိုရင် ထိပ်တန်းကစားသမား တစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ ၂ဝ၁၈ ကမ္ဘာ့ ဖလားပြိုင်ပွဲဝင် ပြင်သစ်ကစာသမား ၂၃ ဦးမှာ ၈ ဦးက ပဲရစ်ဆင်ခြေဖုံးရပ်ကွက် တွေကကြီးပြင်းလာခဲ့သူတွေဖြစ်ပြီး အမ်တီတီ၊ တိုလစ်ဆိုနဲ့ ဖီကာတို့ကတော့ လိုင် ယွန်ဆင်ခြေဖုံးရပ်ကွက်တွေကနေ မွေးဖွား လာသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့အတွက်က တော့ ဘောလုံးသာလျှင်ဘဝပါ။ ဘောလုံး က သူတို့ဘဝတွေကို အကြီးအကျယ် ပြောင်းလဲစေခဲ့သလို အမှောင် ကမ္ဘာကနေ ဆွဲထုတ်ပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၉၅ ခုနှစ်က လီဂူးပြိုင်ပွဲမှာ ပဲရစ်မြိုခံ ကစားသမား ၁ဝ ရာခိုင်နှုန်းသာရှိခဲ့ပေ မယ့် ၂ဝ၁၃ မှာတော့ ၂၃ ရာခိုင်နှုန်းအထိ တိုးတက်လာခဲ့တာကိုကြည့်ရင် ဘောလုံး ဟာသူတို့အတွက် ဘယ်လောက်အထိ အရေးပါနေသလဲဆိုတာကို သိသာထင် ရှားစေပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ် ၂ဝ က ပြင်သစ်အသင်းဟာ ဇီဒန်း၊ သူရမ်၊ ဒက်ဆယ်လီစတဲ့ မွေး စားသားတွေရဲ့ခြေစွမ်းပြမှုနဲ့အတူ ၁၉၉၈ ကမ္ဘာ့ဖလားကိုရယူနိုင်ခဲ့ပြီး အခုအခါမှာလည်း အာဖရိက ကစားသမားတွေများ လွန်းလို့ ဗိုလ်လုပွဲတက်လာတဲ့ အာဖရိက အသင်းလို့ လှောင်ပြောင်မှုတွေရှိနေပေမယ့် လက်ရှိပြင်သစ်အသင်းကတော့ အာဖရိအသင်းတွေထက်ပိုတဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်မျိုးကို ပြသနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဘော လုံးကို ဘဝတစ်ခုအတွက်ခက်ခက်ခဲခဲ ကြိုးစားခဲ့ရသူတွေကြောင့် ပြင်သစ်အသင်းကို ကမ္ဘာ့ဖလားဗိုလ်လုပွဲမှာ သာမန်ထက်ပိုတဲ့အသင်းတစ်သင်းအဖြစ် မြင်တွေ့ရဖွယ်ရှိနေပါကြောင်း ဖော်ပြလိုက်ရပါ တယ်။
နည်းပြသစ်အဖြစ် ဆာရီကို ချဲလ်ဆီး တရားဝင်ခန့်အပ်
မြဝတီ - ကော့ကရိတ် အမြန်လမ်းတွင် ခြောက်ဘီးယာဉ်တစ်စီး အရှိန်မထိန်းနိုင်ဘဲ လမ်းဘေး ရပ်ထားသောေ
စစ်ကိုင်းမြို့၏ ပထမဆုံး အပန်းဖြေဥယျာဉ်နှင့် ခေတ်မီ ကစားကွင်း တည်ဆောက်မှု ၉ဝ ရာခိုင်နှုန်းကေ??
ဂျေရုဆလင်သို့ သံရုံးပြောင်းရွှေ့ရေးအတွက် အစ္စရေးက နိုင်ငံ ၁ဝ နိုင်ငံနှင့်တွေ့ဆုံ
ဆီးသီးဈေး မကောင်းသည့် အတွက် ဒီပဲယင်းနယ် ဆီးခြံစိုက် တောင်သူများ အလုပ်အကိုင် ပြောင်းလဲ လုပ?
ညောင်ရေသွန်းပွဲတော်၌ လှည့်လည်မည့် အသင်းများ စီတန်းရန် မဲနှိုက်